#DataMustFall: UVodacom uthi uzibophezele ekwehliseni intengo yama-data | isiZulu
UTelkom uwine ingqophamlando yecala ngoVodacom
UVodacom nohlelo olushibhile lokubuka ama-video ku-YouTube
Johannesburg – UVodacom uzobamba iqhaza emihlanganweni yohlelo lokubonisana ne-Independent Communications Authority of South Africa’s (Icasa) mayelana nokubhalwa kwemithetho ezolawula ukuphelelwa yisikhathi kwama-data kanjalo nokubiza kwawo kumakhasimende angekho ezinhlelweni zama-contract (out-of-bundle).
UVodacom utshele iFin24 ukuthi uzibophezele ohlelweni lokubhala imithetho emisha, ngemuva kokungenelela kwale nhlangano elawula ezokuxhumana kuleli ekungabonini ngaso linye okuqhubekayo phakathi kwezinkampani zomakhalekhukhwini kanye namakhasimende ngenxa yokumba eqolo kwama-data.
“UVodacom uzibophezele ekwehliseni intengo yama-data futhi usuwehlise intengo yama-data ngo-44% eminyakeni emithathu eyedlule.
OLUNYE UDABA:I-Icasa empini yokuqeda ukuphelelwa yisikhathi kwama-data
“Ngezinto ezifana noJust4You, ezinika amakhasimende ama-bundles ngehora, ansukuzonke, awesonto kanye nawenyanga, uVodacom uze ngamandla kakhulu eminyakeni eyedlule ohambweni lokuguqula intengo,” okhulumela uVodacom utshele iFin24 kuleli sonto.
Isinyathelo sakamuva se-Icasa sokungenelela emkhankasweni we-#DataMustFall kuhloswe ngaso ukuthi kulawulwe ukushesha kokuphelelwa yisikhathi kwama-data, ngokusho kwesaziso esishicilelwe kwi-Government Gazette ngoMsombuluko.
Le nhlangano ihlose ukunxenxa izinkampani zezokuxhumana ukuthi zilule isikhathi sokusebenza kwama-data ukuze engeke asheshe ukuphelelwa yisikhathi.
Umphakathi ubekelwe kuze kube umhlaka-19 kuSepthemba ukuthi wenze izincomo.